Fihetseham-Bahoaka Manohitra Ny Fikasana Hampiakatra Ny Hetra Ao Ekoatora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2015 2:49 GMT
Tamin'ity herinandro ity, taorian'ireo hetsi-panoherana tany amin'ny tanàna maro sy ny fitsidihan'ny Papa Francis, sendra ny taolana ny fikasana iray vaovaon'ny Filoha Ekoatoriana Rafael Correa hametraka lalàna vaovao, izay nikatsaka ny hilaminan'ny rivotra politika tao amin'ny firenena. Mety hametraka hetra mitombo an-dàlana amin'ny raharaha fandovàna mitentina hatramin'ny 35.400 dolara sy hetra 75 isanjato amin'ny tombony azo avy amin'ny renivola sy ny fananantany ilay volavolan-dalàna napetraky ny Filoha Correa.
Ora roa taorian'ilay fanambaràna anefa dia niova hevitra i Correa. Iny alina iny, tao anatin'ny “Hafany ho an'ny Firenena” dia nilaza tamin'ny firenena i Correa fa hosintoniny vonjimaika aloha ilay tolodalàna momba ny hetra, mba hiantohana ny hisian'ny tontolo “mandry fahalemana sy ravoravo” mandritry ny fitsidihan'ny Papa Francis.
Kanefa, tsy nisinda ireo fihetsiketsehana sy fanoherana ara-politika an-ilay fampiakàrana hetra. Nisy fihetsiketsehana goavana natao nanerana ny firenena ny 18 sy 25 Jona, ary notakian'ny fiaraha-mientana politika Democracia Sí ny hanaovana fitsapankevitra momba ny fitantanan'i Correa, loza mitatao mety hahavery asa ny filoha.
Tany ampiandohan'ny Jona, tafidina teny an'arabe ny olana sosialy izay nanomboka tamin'ny tenifototra tety anaty aterineto (toy ny #FueraCorreaFuera, na “MIALACorrea,” sy #SigueCorreaSigue, na “MIJANONACorrea”), nanosika ireo hetsi-bahoaka, hatramin'ny fihetsiketsehana ho fanohanana ny Filoha Correa sy ny antoko eo amin'ny fitondrana:
No se necesita una revolución y cambiarlo todo para progresar, solo hay q dejar a la gente en paz. #FueraCorreaFuerapic.twitter.com/dK952hCXOG
Por un #Ecuador productivo y generador de empleo #FueraCorreaFuerapic.twitter.com/OPx8rLobj7